'हम दिल दे चुके सनम २' मा सलमानको हिरोइन दिपिका कि कटरिना ? ⋆ ए टु जेड समाचार डट कम - ए टु जेड समाचार डट कम
‘हम दिल दे चुके सनम २’ मा सलमानको हिरोइन दिपिका कि कटरिना ?
२१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०९:३४
फाल्गुन २१ – सन् १९९९ को सुपरहिट फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ को सिक्वेल बन्ने चर्चा चलिरहेको छ । १९ बर्ष अघीको सुपर हिट फिल्ममा सँगै काम गरेका सलमान खान र निर्देशक सञ्जय लीला भन्सालीले फेरी सँगै काम गर्न लागेका हुन् ।
भन्सालीले सलमानलाई लिएर फिल्म बनाउन लागेका हुन् । रोमान्टिक जनरामा बन्ने फिल्मको ‘हम दिल दे चुके सनम’ को सिक्वेल हुने बताईएको छ । तर यसको अधिकारिक जानकारी भने आएको छैन । अहिले भने यो फिल्ममा सलमानको हिरोइन को हुने भन्ने बिषयले चर्चा लिइरहेको छ । ‘हम दिल दे चुके सनम’ मा सलमानको हिरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन रहेकी थिईन् । तर सिक्वेलमा भने ऐश्वर्या नहुने पक्का पक्की रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार फिल्मको लागि दिपिका पादुकोण र कटरिना कैफको नाम चर्चामा रहेको छ । यि दुई मध्य एक फिल्ममा सलमानको हिरोइन बन्ने सम्भावना रहेको छ । फिल्मका लागि सलमानले आफ्नो फेवेरट हिरोइन कटरिनाको नाम सिफारिस गरेका छन । तर निर्देशक भन्सालीले भने दिपिकाको नाम अघी सरेका छन । दिपिका भन्सालीको फेवेरट हिरोइन हुन् । दिपिका र भन्सालीले एक साथ धेरै फिल्ममा काम गरेका छन् ।
भन्साली फिल्ममा दिपिकालाई नै सलमानको हिरोइन बनाउन चाहन्छन् । सलमान र दिपिकाले अहिले सम्म कुनै पनि फिल्ममा सँगै काम गरेका छैनन् । यद्दपी दर्शकहरु भने यि दुईलाई एउटै फिल्ममा हेर्न चाहन्छन् । यही कारण पनि भन्साली दिपिकालाई नै सलमानको हिरोइन बनाउने सोचमा रहेका छन् ।